पुस्तक प्रकाशन गर्दै हुनुहुन्छ ? बुद्धि सागरका दश सुझाव जान्नुहोस् - Everest Dainik - News from Nepal
पुस्तक प्रकाशन गर्दै हुनुहुन्छ ? बुद्धि सागरका दश सुझाव जान्नुहोस्
२०७५, ११ मंसिर मंगलवार
काठमाडौं, मंसिर ११ । धेरैलाई पुस्तक प्रकाशनकाबारे धेरै कौतुहल हुन्छ । र, प्रायः पहिलोपल्ट पुस्तक प्रकाशन गर्ने सोचमा रहेकालाई बढी नै हुन्छ । प्रायः को कौतुहल आख्यानका बिषयमा भएको देखिन्छ । पुस्तक प्रकाशनअघि के गर्ने त ? आख्यानकार बुद्धिसागरका १० सुझाव यस्ता छन्-
१- किताव छाप्न कति पैसा लाग्छ ?
— त्यो त पुस्तकको पृष्ठ हेरेर थाहा हुन्छ । कस्तो कागज, कस्तो गाता र कस्तो प्रेसमा छाप्नुहुन्छ, त्यसले मूल्य फरक परिरहन्छ ।
तर, अहिले नेपालमा धेरै नै प्रकाशन गृह छन् । त्यसैले कुनै पनि प्रकाशन गृहसंग सम्पर्क गर्नुभयो र तपाईको सृजना प्रकाशनसंस्थालाई चित्त बुझ्यो भने पैसा लाग्दैन । झन्, पुस्तक बिक्री मार्फत तपाईले रोयल्टी पाउँनुहुन्छ ।
२- रोयल्टी कति आउँछ ?
— रोयल्टी, प्रकाशक र लेखक बिच गोप्य सम्झौता हुने कुरा हो, त्यसैले यति उति त भन्न सकिदैन तर नेपालमा हरेक पुस्तकबाट १० प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतसम्म दिने चलन छ । सुरुवातमा थोरै रोयल्टी पाएपनि तपाईंको कृतिको माग भयो र बजारमा प्रभाव जमायो भने रोयल्टी बढ्दै पनि जानसक्छ ।
३- प्रकाशकसित कसरी सम्पर्क गर्ने ?
— तपाईकै र्‍याकहरुमा थरीथरी प्रकाशनसंस्थाले प्रकाशन गरेका पुस्तकहरु होलान् । त्यसैमा सम्पर्क ठेगाना हुन्छ । तपाई त्यहाँबाट सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । र, प्रायः प्रकाशनसंस्थाका ब्यक्तिहरु फेसबुकमा पनि हुनुहुन्छ, म्यासेजबाट पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ।
४- प्रकाशकसित कसरी कुरा गर्ने ?
— अनेक भाषा घुमाएर कुरा गर्न थाल्नु भयो भने प्रकाशहरुलाई दिक्क लाग्न सक्छ । त्यसैले आफ्नो पुस्तकको कथासार बनाउँनुस् । हजार शब्दजतिको ।
अनि, आफूलाई सबैभन्दा राम्रो लागेको एक अध्याय, दुई देखि तिन हजार शब्दसम्मको, पनि नथ्थी गर्नुस् । र, प्रकाशकनसंस्थाको इमेलमा पठाईदिनुस् । तर, तारान्तार सम्पर्क गरेर झिँजो नलगाईदिनुस् । यदि प्रकाशकलाई तपाई पुस्तक मन पर्‍यो भने आँफै सम्पर्क गर्छन् ।
५- पहिलो पुस्तक हो र म खासै चर्चित पनि छैन । के छाप्लान् ?
— राम्रो पुस्तकको कमी सधैँ हुन्छ । त्यसैले छाप्छन् तर आँफैले बिमोचनको मितीसम्म सोचेर सम्पर्क नगर्नुस् । पाइप लाइनमा धेरै पुस्तक हुन्छन् । समयको मार्जिन अलि धेरै नै राख्नुस् । यदि तपाईको पुस्तक गजवै लाग्यो भने झन् समय लगाउँन सक्छन् । किनभने, पुस्तकको प्रमोसनलाई उनीहरुले धेरै आइडिया सोच्नु पर्ने हुन्छ ।
६- मेरो पहिलो पुस्तक हो, पाठकले सजिलै पढ्लान् ?
— यदि तपाईँका रचना फुटकर रुपमा पनि प्रकाशित भएका छैनन् भने पुस्तक पाठकहरुबिच फैलिन अलिकति लामो समय लाग्छ । त्यसैले फुटकर रुपमा बिभिन्न पत्रपत्रिकामा पठाउँन सक्नुहुन्छ । सोँझै पुस्तकतिर लाग्नु भन्दा पनि पहिला केही रचना फुटकर रुपमा प्रकाशन गर्नु लाभदायी हुन्छ । जसले तपाईको पाठकहरु निर्माण गर्न सक्छन् । र, तपाईको पुस्तक प्रकाशन भएपछि, पढिदिने पनि उनै हुन्छन् ।
७- फेसबुकमा मेरा रचना चर्चित हुन्छन् !
— फेसबुकलाई धेरै बिवश्वास नगर्नुस् । एक त फेसबुकमा साथीहरु धेरै हुन्छन् । तपाईलाई खुशी बनाउँन पनि वाह् वाह् गरिदिन सक्छन् । र, प्रायः साथीहरुलाई तपाई मन पर्नुहुन्छ, त्यसैले रचना पनि मनपर्न सक्छ । तर, पुस्तक त साथीहरुले मात्र पढिदिएर हुँदैन ।
पत्रपत्रिका अथवा अनलाइनहरुमा रचना प्रकाशन गर्नुभयो भने तपाईलाई चिन्दै नचिन्नेले पनि पढ्छन् । र, उनीहरुलाई राम्रो र नराम्रो भन्न गाह्रो पनि हुँदैन । केही समय फुटकर रचना प्रकाशित गर्ने । आएका सुझावहरुलाई मनन गरेर लेखन सुधार्ने हो भने तपाईको रचनामा पनि शान पनि लाग्नेछ, पाठक पनि पाउँनुहुनेछ ।
८- पत्रपत्रिकाले छापिदिएनन् भने के गर्ने ?
— राम्रो छ भने कुनै पनि भनसुन गर्नु पर्देन। सजिलै छापिन्छ । र, छापिएको रचनाको राम्रै पारिश्रमिक पनि पाउँनुहुन्छ । दुई तिनहजार शब्दको रचनाको सामान्यता दुईतिनहजार सजिलै पाउँनुहुन्छ ।
तर, रचना पठाईसकेपछि, धेरै गनगन गर्नू र कहिले छापिन्छ भनेर सोधिरहनू पनि हुँदैन । त्यसको सट्टा रचना अस्विकृत भए, किन भयो भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ । जस्ले तपाईलाई सुधार गर्न सहयोग पुग्नेछ । एउटाले अस्विकृत गरेको रचना अर्को अर्कोतिर दगुराउँनुभन्दा नयाँ रचना पठाईदिनु बेश हुन्छ ।
९- म हातले लेख्छु, के पुस्तक टाइप नै गरेको हुनुपर्छ ?
— पर्देन । नेपालका केही चर्चित लेखक हातले नै लेख्छन् । तर, पनि आफूले लेखेको कुरा अरु मार्फत टाइप गराएर तयार गर्नुभयो भने सहज हुन्छ । अझँ प्रिती फन्टमा गर्नु भयो भने झन् राम्रो । किनभने, यो फन्ट अरु धेरै फन्टमा परिवर्तन गर्दा शब्दहरु बिर्गने समस्या हुँदैन ।
१०- पुस्तक त तयार छ । तर, डर लागिरहेको छ भयो कि भएन भनेर मैले पढेका अरु पुस्तकजस्तो त छैन ।
— अरुका पुस्तकजस्तो नहुनु नै तपाईको आफ्नो शैली हुनु हो । तपाईले पठाएको पुस्तक अक्षरसः त्यहि छापिन्छ भन्ने पनि हुँदैन । सम्पादन पनि हुन्छ । पुस्तक सम्पादन हुनु भनेको तपाईले लेखेभन्दा बेग्लै हुनु होइन ।
तपाईले थाहा नपाएका, तपाईले गर्न सक्ने धेरै कुरा सुझावको रुपमा पाउँनुहुन्छ । सुधार्ने आँफैले हो, चित्त बुझेका कुरामा । सम्पादकका सुझाव चित्त बुझेनन् भने तपाई परिवर्तन नगर्न पनि सक्नुहुन्छ ।
समान्यता सम्पादकले तपाईलाई परिवर्तन गर्न विश्वस्त पार्छन् । विश्वस्त हुनु भएन भने तपाईले सम्पादकलाई विश्वस्त पार्नू पर्ने हुन्छ, किन परिवर्तन नगर्ने भनेर । हेर्दा अप्ठ्यारो देखिएपनि सम्पादनको यात्रा रोचक हुन्छ । यति भएपछि, तपाईको पुस्तक तयार हुन्छ । यो सामग्री बुद्धि सागरको फेसबुकबाट लिएका हौं ।
ट्याग्स: Budhhi Sagar
२३ औं दिन ईः ले अनसन तोडे
उपत्यकामा ह्वात्तै बढ्यो कोरोना, ठूलो ‘डिजास्टर’ हुने चिन्ता
कोरोनाका बिरामी राखिएको होटलमा आगलागी, ७ जनाको मृत्यु
काठमाडौंमा टाउकोविनाको शव भेटियो, कसको हो ?
पार्टी फुट्दैन, फुटाउन चाहने आफैँ सकिन्छन्ः पूर्वमन्त्री तामाङ
कोरोनाबाट थप १ जनाको मृत्यु, मृतक संख्या ७४ पुग्यो
आजदेखि उपत्यकामा सटडाउन लागू, यी हुन् बन्द हुने सेवाहरू (सूचीसहित)
शिक्षण संस्था खोल्न फेरि अन्योल, तत्काल एसईईको नतिजा पनि नआउने
What drivers said after Saturday's Michigan Cup race
Kevin Harvick — Winner: “Anytime we come to Michigan since I've been at Stewart‑Haas Racing these cars have been just lightning fast. It's definitelyaplace we feel like we should come up here and contend for the win, and today our Busch Light Apple Ford ...
SAN FRANCISCO (AP) — The latest from the PGA Championship at TPC Harding Park: ___. Dustin Johnson's 65 put him in the lead at the PGA Championship with six twosomes left on the course at TPC Harding Park. Johnson made eight birdies — the most ...
Fire at battery recycling factory in Campbellfield causes smoke alert for nearby suburbs
Loud explosions have echoed through Campbellfield in Melbourne's north this morning afterabattery recycling factory went up in flames. More than 70 firefighters have been battling the blaze on Sydney Road, which broke out just before 4:30am (AEST).
The 2020 Perseid meteor shower peaks soon: How to watch the show
Some 2019 Perseids, as seen from Macedonia. Spaceweather.com/Stojan Stojanovski. It's early August, which means the annual Perseid meteor shower is active and about ready to peak. The Perseids are one of the best, brightest batches of shooting stars, ...
LAKE BUENA VISTA, Fla. -- T.J. Warren scored 39 points, including seven straight to put Indiana ahead in the final two minutes, and the Pacers beat the Los Angeles Lakers 116-111 on Saturday. LeBron James had 31 points, eight rebounds and seven ...